Kooxda Real Madrid oo u dhaqaaqeysa daafac ka tirsan Paris Saint-Germain… (Meeqa milyan oo gini ayay ku doonaysaa?) – Gool FM
(Madrid) 17 Okt 2019. Macallinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa la soo warinayaa inuu doonayo inuu u dhaqaaqo soo xero gelinta daafaca naadiga Paris Saint-Germain ee Marquinhos.
Waxaa la rumeysan yahay in inkastoo macallinka reer France uu doonayo in Madrid ay ku ciyaarto habka 5-3-2, haddana uusan kalsooni ku qabin in midkood Nacho ama Eder Militao ay yihiin kuwa ku habboon wadashaqeynta Sergio Ramos iyo Raphael Varane, sidaas darteedna wuxuu doorbidayaa in shaxdiisa lagu soo daro difaac dhexe oo cusub.
Warsidaha Don Balon ayaa warinaya in Zidane uu bartilmaameedkiisa sare ka dhigtay xiddigan reer Brazil, iyadoo ku guuleystaha Koobka Adduunka uu daawaday saacado cajalad ah si uu u qiimeeyo awoodda 25-sano jirkaan.
Wararku waxaa kale oo ay soo jeedinayaan in qiimaha ay Real Madrid ku doonayso laacibkan uu ku kici karo ugu yaraan 50 milyan oo euro oo u dhiganta 43.2 milyan oo gini, PSG ayaana iska diidi doontaa inay iska iibiso laacibkan, maxaa yeelay waxa ay aaminsan yihiin in daafacii hore ee Roma uu soo galayo meeshii ugu sarreysay awooddiisa ciyaartoy ahaan.
Tan iyo markii uu u dhaqaaqay garoonka Parc des Princes sanadkii 2013-kii, Marquinhos ayaa 20 gool u dhaliyey kooxda haysata horyaalka Faransiiska, waxaana uu u saftay in ka badan 231 kulan tartammada oo dhan.
De Gea, Pogba, Wan-Bissaka... (Manchester United oo wajahaysa Liverpool iyadoo ay ka maqan yihiin siddeed ciyaaryahan)